64-Cisho kadib, Horyaalka Jarmalka Bundesliga oo maanta la dheelayo. - Awdinle Online
64-Cisho kadib, Horyaalka Jarmalka Bundesliga oo maanta la dheelayo.
Maanta oo Sabti ah kuna beegan 16-ka May 2020 waxaa dib u bilaabanaya horyaalka Jarmalka ee Bundesliga kadib 64-Cisho oo hakad la geliyay ciyaaraha dalkaas oo saameyn taban ku yeeshay Covid-19.
24-kii Saac ee lasoo dhaafay waxaa la hubinayay xaaladaha ku horgudban in la baaso kubadda, inkasta oo isbadal ku imaanayo hab ciyaareedkii 64-maalmood kahor uu ahaa Horyaalka Jarmalka.
Ciyaartoyda, Madaxda iyo Shaqaalaha kale ee kooxaha ayaa qaadanaya amarrada ay isku garteen Dowladda iyo xiriirka kubadda Cagta si looga fogaado faafidda Xannuunka Coronavirus oo si fudud dadka isugu gudbiyaan.
Garoomada looma ogolaan doono taageerayaal, waxaana kuraasta loo sameeyay ay noqon doonaan kuwo cidla ah, sidoo kale waxaa lala socon doonaa dhaq-dhaqaaqyada dhaqaatiirta Caafimaadka iyo Carruurta kubadda soo qabata kolka uu baxo iyo kuwa Cabbitaanada bixiya.
Maanta waxaa la dheelayaa Lex kulan, shan kamid ah waxa ay soo geli doonaan isku saacad, marka laga reebo hal ciyaar oo caawa 7:30PM halka shanta kulan ee kale ay soo geli doonaan 4:30pm waqtiga geeska Afrika.
Kulanka daahfurka ee indha lagu eegayo waa kan Borussia Dortmund iyo Shalka 04 oo booska lixaad ka fadhisa kala sareynta Hoyraalka Jarmalka ee Bundesliga.
Inta badan Dalalka Yurub ayaa laga daawan doonaa, maadaama muddo fog hakad uu galay horyaalada dalalka iyo kan qaaradda, waxaana wadada kusoo jira Horyaalada Ingiriiska, Spain iyo Talyaaniga.
Previous articleHeshiis La Dhex Dhigay Beelo Ku Dagaalamay Gobalka Mudug
Next articleWabiga Shabeelle Oo Dad Ku Qaaday Magaalada Baladweyne